Ọhụrụ Bhutan-Israel mmekọrịta
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Bhutan » Ọhụrụ Bhutan-Israel mmekọrịta
Akụkọ kacha ọhụrụ na Bhutan • Akụkọ Ọchịchị • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
ọkọlọtọ bhutan pixabay
Obere mba dị n'Ebe Ndịda Eshia nwere naanị mmekọrịta mba na mba ole na ole ma tụọ ọganiihu ya dabere na ndetu obi ụtọ mba
Israel kwuputara na Satọdee na ha emeela mmekọrịta mmekọrịta na Bhutan, mba nke ise mere nke a n'ọnwa ndị gara aga n'akụkụ United Arab Emirates, Bahrain, Sudan na Morocco. Mana Bhutan abụghị mba Arab, ọtụtụ ndị nụrụ ozi banyere nkwekọrịta ịhazi iwu nwere ike jụọ onwe ha, sị, "Gịnị bụ Bhutan?"
Onye nnochite anya Israel na India Ron Malka na onye nnọchi anya Bhutan na India Vetsop Namgyel binyere aka na nkwekọrịta nkwekọrịta na abalị Satọde. Ntinye aka nke nkwekọrịta ahụ bịara mgbe mkparịta ụka nzuzo dị n'etiti ndị isi si mba abụọ ahụ, gụnyere nleta nleta, na afọ ndị na-adịbeghị anya ịmalite mmekọrịta mmekọrịta mba ọzọ, dịka ozi ndị si mba ofesi si kwuo, nke kwuru na ya na Bhutan na-arụ ọrụ site na Mashav Division, Agency for Development International. Nkwado. Site na nke a, ụmụ akwụkwọ si Bhutan abịarutela Israel ịnata ọzụzụ gbasara ọrụ ugbo.
Dabere na nkwupụta ọnụ banyere azụmahịa ahụ, mba ndị ahụ na-eme atụmatụ ịkwado na mmepe akụ na ụba, teknụzụ na ọrụ ugbo. O kwukwara na mgbanwe ọdịbendị na njem nleta ga-abawanye ".
Malka kwuru na "nkwekọrịta a ga-emepe ọtụtụ ohere maka imekọ ihe ọnụ maka abamuru nke ndị obodo anyị abụọ."
Mba South Asia nke Bhutan, nke a maara dị ka "Land Of The Thunder Dragon," bụ obere mba na-enweghị mmiri nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Himalayas. Ọ dị site na Tibet n'ebe ugwu na India na ndịda ma nwee ọnụ ọgụgụ ndị na-erughị 800,000. Isi obodo ya na obodo ukwu bu Thimphu. Mpaghara obodo ahụ dị square kilomita 14,824 (38,394 square kilomita), na-eme ka ọ hà ka steeti US nke Maryland.
okpukpe ala gọọmentị nke Bhutan bụ Vajrayana Buddha, nke ihe ruru ụzọ atọ n'ụzọ anọ nke ndị obodo ahụ na-ekpe. Otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị bi na ya na-ekpe okpukpe Hindu. Nnwere onwe okpukpe na-ekwe nkwa ma na-eme ntọghata site na iwu gọọmentị machibidoro.
Bhutan ghọrọ onye ọchịchị nke usoro iwu mgbe ọ na-eme ntuli aka mbụ ya na 2008. Tupu nke ahụ, ọ bụ ọchịchị zuru oke. Aha onye eze nyere bụ Dragọn ahụ bụ Eze.
Mba ahụ nwere mmekọrịta mmekọrịta mba na mba naanị 53, wee bụrụ onye otu United Nations na 1971. Dịka ọmụmaatụ, United States na United Kingdom bụ otu n'ime mba ndị na-enweghị mmekọrịta mmekọrịta na Bhutan. Naanị obodo asaa nke mba 53 ahụ nwere naanị ndị nnọchi anya mba ahụ, naanị India, Bangladesh na Kuwait nwere ndị nnọchi anya mba na Bhutan. Mba ndị ọzọ na-ejigide ndị nnọchi anya mba ọzọ site na ndị nnọchi anya ha na mba ndị dị nso. E kwere ka ịntanetị na telivishọn bata na mba ahụ na-amalite na 1999.
Bhutan na-enwe mmekọrịta siri ike nke akụ na ụba, nke usoro, na nke ndị agha na India, yana mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Bangladesh. Isi mbupụ ya bụ ike hydroelectric na India. Mba a mechiri emechi nye ndị si mba ọzọ ọkachasị na mpụga nke South Asia, dị ka ụzọ iji chekwaa ọdịbendị nke mba ahụ na ichekwa akụ ya. Agbanyeghị na mba ahụ anaghị eme njem nleta, ụmụ amaala India na Bhutan nwere ike ịga mba ibe ha na-enweghị akwụkwọ ikike ngafe ma ọ bụ visa. Bhutan mechiri ókèala ya na China dị nso mgbe ndị China wakporo Tibet na 1959
Asụsụ mba ahụ bụ Dzongkha, nke a makwaara dị ka Bhutanese, nke bụ otu n’ime asụsụ Tibetị 53 a na-asụ na Central Asia. Otú ọ dị, Bekee bụ asụsụ ntụziaka na ụlọ akwụkwọ na Bhutan.
A maara Bhutan dị ka obodo kachasị nwee obi ụtọ n'ụwa ma, n'ezie, jiri gọọmentị Bhutan guzobere mba Gross National Happiness Index na 2008 wee debe ya ọbụna karịa nnukwu ngwaahịa ụlọ na mba ahụ. Nke a nwere ezi uche, ebe Bhutan bụ otu n'ime mba ndị kasị daa ogbenye na ụwa, na ịda ogbenye nke 12 pasent.
Maka nri dị n'etiti anyị, Bhutan nwere ụfọdụ nri ọdịnala ya. A na-akọ nri mba kachasị mma bụ Ema Datshi, nchikota chiiz na chiiz. Ihe oriri ndị ọzọ gụnyere Jasha Maroo, ma ọ bụ Maru, nke bụ ọkụkọ na-ekpo ekpo, na Phaksha Paa, ma ọ bụ anụ ezi na-acha uhie uhie.
Ọ bụ ezie na a maara Bhutan dị ka ebe dị nchebe ma na-ezu ohi dị obere, Lonely Planet na-ekwu na e nwere ihe egwu na iwe na-ele anya, gụnyere: nkịta ndị na-agba n'okporo ámá na-eme mkpọtụ dị ukwuu n'abalị na oria oke dị ize ndụ; okporo ụzọ ndị siri ike ma na-agagharị; Groupstù ndị India kewapụrụ iche nọ n'ọrụ gafere ókè ahụ site na ndịda ọwụwa anyanwụ Bhutan; na mmiri ozuzo, igwe ojii, snow na okwute nwere ike imetụta njem site n'okporo ụzọ na ikuku.
A maara Bhutan maka ebe obibi ndị mọnk, ebe ewusiri ike - nke a maara dị ka dzongs - na ebe ndị mara mma. Ndị ọbịa ga-abụrịrị ndị njem nleta na usoro akwadoro, nke akwadoro, nke a na-eduzi, ma ọ bụ ndị ọbịa nke gọọmentị. Ha nwekwara ike ịbanye mba ahụ dị ka ọbịa nke "nwa amaala nke ụfọdụ guzo" ma ọ bụ soro ndị ọrụ afọ ofufo.
by MARCY OSTER, IHE MGBE EGO